Benefit and harm | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Benefit and harm
Ahoana ny fomba hampisy loharano maina ao amin'ny firenena?
Tsy ela akory izay, tamin'ny taonjato faha-20, nisy ny hevi-baovao iray, ny lazany dia mihamitombo haingana any amin'ny firenena maro manerana izao tontolo izao. Momba ny fananganana ny tontolo iainana. Amin'ny teny tsotra, ity dia fambolena sy fambolena. Amin'ny ankapobeny, endrika ara-javakanto izy io, izay mampifanaraka ny rafitra sy ny planina ary ny fananganana.
Kelp maina: ny soa sy ny loza
Maro ireo seapôly no heverina ho vokatra "mpananihany". Ampahany kely ihany no marina - raha ny marina, manana volavolam-pahalalana be dia be izy ireo, izay mety hahasoa ny sain'ny rehetra. Ary mijanona ao anatin'ity andalana ity ny algà. Mianatra bebe kokoa momba ny iray amin'ireo zavamaniry ireo izahay, mamantatra hoe inona ny kelpa maina ilaina, ary inona no fomba fampidirana fanolorana toro-lalana hampiasaina.
Usneya bearded: ny toetra ara-pahasalaman'ny lichen
Usneya bearded dia lany, izay fanafody voajanahary mafy. Lichen thalli dia ampiasaina amin'ny fanarenana, fitsaboana aretina isan-karazany. Hatramin'ny fahiny, dia fantatra momba ny toetra mahasoa ny zavamaniry izany. Ny fitsaboana fitsaboana dia natolotra hatramin'ny taranaka fara mandimby ary mbola velona hatramin'izao. Ny famaritana botanika momba ny Usnea ny volombava dia felana misy lava lava, izay mitovitovy amin'ny volombava (noho izany ny anarana).
Ny menaka sesame ilaina ho an'ny vatan'olombelona
Ny zavamaniry mitovitovy amin'ny sesame latina tsara tarehy latinina dia nahasarika ny sain'ny olona nandritra ny taonjato maromaro noho ny toetra mahasoa sy ny herin'ny angovo. Nahitana fampiharana be dia be tamin'ny fihinanana, ny fitsaboana nentim-paharazana, ny cosmetology. Ampiasao ny voa sy ny menaka. Momba ny tombontsoa sy ny fahasarotan'ny lahateny farany.
Salt: toetra tsara sy ratsy ho an'ny vatan'ny olombelona
Samy mampiasa sira isan'andro isika tsirairay avy, ary tsy misy na inona na inona karazan-tsakafo izay toa tsy misy tsirony. Indraindray dia afaka manolo izany amin'ny tsiron-tsakafo isika, kanefa ny ankamaroan'io mineraly io dia mbola manatrika azy ireo. Tsy misy sira, tsy azo atao ny mitahiry legioma, hena na trondro. Ankehitriny isika dia hianatra bebe kokoa momba ny inona ity vokatra ity, maninona no ilaina amin'ny vatantsika, ary na misy fifandraisana misy eo amin'ny lanjany sy ny habetsahan'ny sira naterina.
Mutton matavy: inona no ilaina, ahoana no hamotika, inona no tokony hatao
Ny lisitr'ireo vokatra ara-tsakafo dia be dia be ka sarotra be ny manisy lisitra azy ireo, indrindra raha jerena ny fikarakarana gastronomie amin'ny foko samihafa. Ao anatin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny iray amin'ireo vokatra hafakely isika - lambafavy (na rambony matavy), izay tsy dia mahazatra loatra ao amin'ny faritanin'i Okraina sy ny Federasiona Rosiana, toy ny any amin'ny firenena hafa eto amin'izao tontolo izao.
Cinnamon miaraka amin'ny tantely: ny toetra mahasoa sy ny tsy fitoviana, ny resipe
Miaraka amin'ny fanaintainana eo amin'ny tendany, ny hatsiaka, ho an'ny tanjona kosmetika ary ho toy ny solo substituir, ny tantely dia eo amin'ny arsenal ny ankamaroan'ny mpitaiza. Toy izany koa ny ranom-boaloboka mahavariana, izay tsy sarotra ny manisy mofomamy manitra na divay mafana. Matetika dia ampiasaintsika manokana ireo vokatra ireo. Saingy amin'ny mpivady dia afaka mitondra tombony bebe kokoa izy ireo, izay hifanakalozantsika bebe kokoa.
Ny fatiantoka mahazaka mavesatra dia mahaliana vehivavy maro, ka saika ny rehetra dia miezaka mitady ny safidy tsara indrindra ho azy ireo. Maro no fantatra momba ny tombotsoan'ny kanelina eo amin'ny olana momba ny fahaverezan'ny fahavoazana, saingy lavitra lavitra ny zavatra fantatry ny rehetra momba ny fihetsika miaraka amin'ny ronono. Manoro hevitra anao izahay handinika izany safidy izany amin'ny fisotroana mahasoa iray ary hianatra bebe kokoa momba ny fananany.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Benefit and harm